Daawooyinka lafdhabarta badankood ma dhisaan lafaha. Midkani wuxuu sameeyaa. - New York Times - TELES RELAY
ACCUEIL » kale Daawooyinka lafdhabarta badankood ma dhisaan lafaha. Midkani wuxuu sameeyaa. - New York Times
Mid ka mid ah maxkamad, Soity ayaa la barbardhigay sanduuq. dhinaca kale, waxaa la barbardhigay befosfonate. Labada daraasadoodba, haweenka qaata Suuriya waxay naftooda ku heleen lafo badan iyo jab yar.
Bishii Janaayo, Sayniska waxaa dib u eegay guddiga latalinta FDA, kaas oo u codeeyay 18 à 1 si ay u ansixiyaan - laakiin waxay waydiiyeen Amgen inuu sameeyo baaritaan dheeraad ah si uu u fahmo saameynta daaweynta wadnaha ee suuragalka ah.
"Waxaa jira baahi weyn oo loo qabo daroogada, iyo sidoo kale cillado iyo dhimasho aan laga bogsan karin cudurkan," ayuu yiri Dr Frederick G. Kushner, oo ah kalkaaliye ku takhasusay bukaanka Louisiana Heart Clinic iyo xubin guddi oo u codeeyay ogolaanshaha daroogada.
Tallaabada xigta, Dr. Bockman ayaa yidhi, waa shirkado si ay u kobciyaan kiniinnada si loo xakameeyo sclerostin sidaa darteed bukaanku uma baahna. irbadaha bilaha ah.
Ma sahlanaan karto in bukaanka lagu qanciyo inay qaataan daawada cusub.
Khubarada ayaa saadaaliyay in la siin doono bukaanada halista ugu sareeya: kuwa ku dhacay jahawad halis ah ama ay qaadeen bephosphonates iyo hormoon parathyroid ah oo aan wax falcelin ah ama ku dhicin waxyeello xun.
Si kastaba ha ahaatee, bukaanka halista badani waxay ka cabsanayaan inay qaataan dawo si looga hortago jabka. Waxay xusuustaan ​​kiisaska dhifka ah ee bukaanada qaata bephosphonates waxayna leeyihiin jabka aan caadi ahayn ama ay ka sii darayaan lafaha daanka.
"Ma xasuusto wanaagga: waxaan ka hortagnaa jabka," ayuu yiri Dr Shoback. "Waxay xusuustaan ​​wax muhiim ah oo laga cabsado in qof uu u sheego."
Dr. Bockman ayaa sidoo kale arkay bukaankan, laakiin waxa ay rajeynayaan inay ugu yaraan ku qanacsan yihiin inay isku dayaan inay la midoobaan.
"Tani waa daroogo aad iyo aad u wayn, Wuxuu yiri. "Taasi waa wax aan u baahannahay."